Ity no Apple Pencil izay namadika an'i Jobs | Avy amin'ny mac aho
Ity no Apple Pencil namadika an'i Jobs
Applelised | | Accessories, About us
Iza no mila pensilihazo? Ity no fanontaniana napetrak'i Steve Jobs tamin'ny taona 2007 ho an'ny mpijery iray gaga tamin'ny fampisehoana fitaovana iray nanamarika teboka mazava, ny iPhone. Ankehitriny, valo taona aty aoriana, dia nihevitra i Apple fa misy valiny tsara amin'ity fanontaniana ity: mila pensilihazo ny matihanina sasany ary ho azy ireo ny orinasa no namorona ny Apple Pencil.
Apple Pencil, a mialoha sy aoriana
Indraindray, araka izay itiavanao zavatra eto amin'ity fiainana ity dia tsy tanteraka izany. Izany indrindra no mitranga amin'ny tranga Apple Pencil.
Steve Jobs te hampiray ny olona sy ny milina izy, satria efa noporofoiny fa mahay mampitambatra ny hakanton'ny zavakanto amin'ny siansa sy ny haitao amin'ny solosaina, fa amin'ity tranga ity dia tsy vitany tanteraka izany. Ny heviny fa tsy misy na inona na inona manelanelana ny mpampiasa sy ilay fitaovana, fa ilay mpampiasa no mifanerasera amin'ilay fitaovana amin'ny fomba mivantana tanteraka, izay lasa karazana fanitarana ny mpampiasa mihitsy, dia mahafinaritra, nefa koa tsy azo atao, farafaharatsiny ho an'ny ny fotoana. Ny ezak'i Apple amin'ity lafiny ity dia goavana tokoa, toy ny zava-bitany. Androany, ny iPad sy ny iPhone dia kitihina amin'ny rantsantanana ary saika manao izany amin'ny fitondrana ny hena amin'ny efijery. Fa eo no mipetraka ny olana, amin'ny teny hoe "saika." Ny iPad dia tsy maintsy mahay ny zava-drehetra, manala ny teny hoe "saika", ary ho an'ity ny Apple Pencil.
Tamin'ny volana Janoary 2007, ny iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny iPhone dia ny tsy fahampian'ny stylus
Nifarana tamin'ny fahafatesany ny vanim-potoan'i Steve Jobs, zava-misy marina fa maro no tapa-kevitra ny handà, saingy eo izany. Ary na dia lava sy lava be aza ny alokalony, ilay orinasa nitazona an'i Tim Cook hatrizay dia tsy maintsy nanao ny zavatra lojika: jereo ny zava-misy ary tadiavo ilay mpampiasa. Toy izao no nisehoany tamin'ny iPad Mini (na dia 9,7 ″ aza ny habeny lavorary araka ny Jobs); izany no nitomboan'ny iPhone hatramin'ny 4 ″ voalohany ary 4,7 sy 5,5 ″ taty aoriana (na dia 3,5 ″ aza ny refy mifanaraka amin'ny Jobs); Ity no fomba ananantsika ankehitriny 12,9 ″ iPad Pro na ny fomba nialantsika tamin'ny tsiambaratelo farany indrindra tamin'ny andro talohan'ny Keynote iray izay nahatonga anao hiarina ara-bakiteny avy eo amin'ny sezanao feno fihetsem-po, ho an'ny teny fototra iray izay talohan'ny herinandro Fantatrao Saika ny zava-drehetra ary nanjary karazana hetsika eklektika misy vokatra marobe izy ireo ary tsy misy na inona na inona misongadina mihoatra ny ambiny. Toy izao no nivoahantsika tamin'ny "solosaina isan-trano" tamin'ny famantaranandro 18.000 euro; Ary izao no toa nihetsiketsika avy amin'ny exclusivity ho elitism i Apple, amin'ny lafiny sasany.
Fa raha tsy ampy izany rehetra izany hanehoana fa nidina tamin'ny tantara ny vanim-potoana Steve Jobs dia tonga ny Apple Pencil, ilaina, saingy mivadika herisetra miaraka amin'ny iray amin'ireo finoana nitarika an'i Jobs hamorona ny iPhone sy iPad: ny fifandraisana mivantana amin'ny milina mivantana.
Saingy tsy tokony hitaraina any an-danitra toy ny ataon'ny sasany isika, ary maro amin'izy ireo no ho hitantsika, na ho ela na ho haingana, miaraka amin'ny Apple Pencil eny an-tanana. Ny orinasa, indray, dia namaly ny filàna, ary io no tanjon'ny teknolojia, hamahana ny filàna.
El iPad ProAraka ny tondroin'ny anarany dia mifantoka amin'ny sehatry ny matihanina izy io, ao anatin'izany ny artista, mpamorona, mpanao sariitatra sns. Ary na miezaka mafy toy inona aza isika, ny rantsantanana dia tsy manome ny marimaritra iraisana ilain'izy ireo amin'ny asany. Miova ny fotoana, mila miova, ary Apple dia tsy nanao afa-tsy ny nilaza tamin'ireo olona ireo hoe: "Hey, mahatsiaro anao izahay", na dia amin'ny vidiny mahamenatra aza.
El Apple Pencil Stylus, penina takelaka, fa fitaovana fanao paoma tokoa. Ny zavatra voalohany manaitra antsika, ankoatry ny vidiny $ 99, dia ny endriny madio, mazava ary minimalista.
Tonga ho famenon'ny iPad Pro, dia natao "hanatsarana" ny fahaizan'ny takelaka, hoy i Jony Ive ao amin'ny horonantsary fampisehoana, ary ho an'ireo matihanina izay mila marimarina ireo dia tsy vokatra ho an'ny mpihaino rehetra izany amin'ny heviny fa tsy isika rehetra no manararaotra ny tombony. Izaho, ohatra, izay tsy manan-talenta manao sary dia tsy hivoatra miaraka aminy. Apple Pencil.
Rehefa mampiasa ny iPad Pro ianao dia misy fotoana ilanao fangarony tanteraka. Izany no antony namolavolantsika ny Apple Pencil, izay mandray ny fahaizan'ny Multi-Touch lavitra noho ny hatramin'izay. (Apple)
Iray amin'ireo tombony azo amin'ny Apple Pencil dia ny takelaka sary naseho tamin'ny kapoka ny penina. Ankehitriny, misy singa iray kely kokoa izay mijanona eo anelanelan'ny olona sy ny milina.
El Apple Pencil manararaotra ny toetra mampiavaka ny 3d mikasika ary izy io dia mahay manavaka ny tsindry isan-karazany amin'ny efijery. Raha mitongilana ny stilosy ianao rehefa manao tsorakazo, dia hitaratra alokaloka ihany koa izany, toy ny pensilihazo grafita mahazatra eo amin'ny taratasy. Ary arakaraka ny fanerena apetrakao amin'ny efijery no mihabe ny tsipika.
Ny fahamarinan'ny Apple Pencil Toa izany, ary hoy aho fa toa tsy mbola tany an-tanako io, saika tanteraka. Nahena ho tsy hita maso ny fotoana iainana.
Mikasika ny fizakan-tenany dia manana bateria 12 ora sy mpampifandray vodin-damosina ao aoriana izay azonao atao ny mampandoa azy io. iPad Pro. Fa ny zavatra miavaka indrindra dia raha lany izy ka tavela eo afovoany ianao, ampifandraiso fotsiny mandritra ny 15 segondra mba hahazoana autonomie 30 minitra hafa.
Raha fintinina, Ny Apple Pencil dia mamaly ny filàna amin'ny alàlan'ny filôzôfia teo aloha izay, farafaharatsiny amin'ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny zava-bita, dia mbola utopian, saingy tsy dia kely loatra ny faniriana amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Ity no Apple Pencil namadika an'i Jobs